Budata Free GIF Text Maker maka Windows
Budata Free GIF Text Maker
Free Budata maka Windows (7.74 MB)
Budata Free GIF Text Maker,
GIF Text Maker efu bụ ngwa efu nke ị nwere ike iji mepụta ederede animated ma ọ bụ mepụta foto na-atọ ụtọ site na ịgbakwunye ederede eserese gị nelu onyonyo gị. Ị nwere ike tinye mmetụta ma ọ bụ onyinyo na ihe oyiyi GIF gị ma ọ bụ gbanwee ọsọ ahụ.
Ngwa na-enye gị ohere ịhọrọ font, ụdị, ndò na omimi nke masịrị gị na ya. Na mgbakwunye, ọ ga-ekwe omume ịhazigharị ndabere nke foto gị na agba nke ahịrị oke na ngwa a.
Iji mee ka foto gị bụrụ ihe na-atọ ụtọ, ị nwere ike ibudata ngwa a ka ịmepụta ederede animated ma tinye ya na foto gị ma tinye mmetụta ndị ị họọrọ na foto gị.
Ngwa nwere mmetụta ederede 36 na-emegharị anya. Na mgbakwunye, ọ na-enye gị ohere bulite foto ndị ị kwadobere na igwe ojii wee kesaa ha site na nyiwe ịkparịta ụka nỊntanet na-ewu ewu Facebook, Twitter, Reddit, Tumblr na mail.
Free GIF Text Maker Ụdịdị
Nha faịlụ: 7.74 MB
Mmepụta: Viscom Software
Na Face Off Max, ị nwere ike ịmepụta foto na-atọ ọchị ma na-atọ ụtọ site na itinye ihu gị na ahụ ọ...
Site na Ulead Gif Animator 5.0, ị nwere ike ịmepụta faịlụ gif nke gị. Site na mmemme Ulead a, ị...
GIF animations bụ otu nime ihe ndị kasị atọ ụtọ ngwá ọrụ nwere ike iji na-ebuga ihe anyị chọrọ ịgwa...
Onye Okike GIF animated bụ mmemme dị irè nke ị nwere ike iji mepụta GIF animated ma ọ bụ dezie GIF...
Mmetụta Gif efu bụ sọftụwia dị mfe ma dị mfe iji mepụta faịlụ gif nke gị site na ịgbakwunye...
Mmemme GIF Effect Maker efu na-enyere gị aka ịmepụta faịlụ GIF site na ịgbakwunye mmetụta animated...
GIF Recorder bụ ngwa dị mfe maka imepụta na dezie faịlụ onyonyo GIF. Site na interface enyi na enyi...
GIF Text Maker efu bụ ngwa efu nke ị nwere ike iji mepụta ederede animated ma ọ bụ mepụta foto...
Ngwa Flex GIF Animator bụ mmemme nkwadebe eserese na ihe nkiri. Ọ bụ mmemme nke ga-aba uru maka ndị...
Advanced GIF Animator bụ mmemme dị irè nke ga-enye gị ohere ịmepụta animation gị, site na mmemme a...